mantsy tato ho ato ny basy tratra tsy misy arakaraka. Ankoatra ireo vita gasy, maro ireo nohafarana avy any ivelany ka tafiditra an-tsokosoko tsy manara-dalàna eto Madagasikara ka
mitana ny sain’ny mpanara-baovao. Misy amin’izy ireny naiditry ny tambajotran’ny mpanao ratsy niray tsikombakomba tamin’ny manampahefana isan-tsokajiny hatrany amin’ny vavahady
fidirana an’i Madagasikara ka hatrany amin’ny fitondrana foibe. Tsy nandalo ny tompon’andraikitry ny fitaovam-piadiana teto izy ireny. Raha ny loharanom-baovao azo antoka dia misy amin’ireo basy
miparitaka no avy amin’ny fandrobana nandritra ny krizy politika ihany koa. Manamafy izany ny mpiandraikitra ny seraseran’ny zandarimariam-pirenena nandritra ny tafa manokana nifanaovana taminy. “ Ny ankamaroan’ireo kalaky mihanaka
ireo dia karazana basy niditra an-tsokosoko teto an-toerana ary tsy nandalo tamin’ny mpiandraikitra teo anivon’ny mpitandro ny filaminana, tahaka ilay kaontenera feno basy teny Iavoloha tamin’ny
fitondrana tany aloha izay tsy nandalo taty amin’ny foloalindahy.” Betsaka ny basy very nandritra ny krizy politika, hoy ny Komanda Herilalatiana Andrianarisaona, tompon’andraikitry ny serasera sy ny
fampitam-baovaon’ny zandarimariam-pirenena. Mitaky finiavana politika ny manampahefana isan-tsokajiny na sivily na miaramila ny famongorana tsy misy hatak’andro ny basy miparitaka, raha tena
hampandry fahalemana an’i Madagasikara. Fihetsika ivelany fotsiny ihany mantsy ny tetikady etsy sy eroa fa loharanon’ny olan’ny tsy fandriampahalemana ity fiparitahana basy ity. Tsy vitsy ny mihevitra
fa ny mpitandro ny filaminana no hirika hahazoan’ny olon-dratsy ireny basy ireny. Etsy an-daniny, tsy mbola nisy mangirana tamin’ny fahalalam-baovao koa ny vokatry ny fanadihadiana mikasika izay
mety ho tompony na mpampanofa ireo faladiam-bala na basy tratra ka zary lasa manome tsiny ho azy ny mpitandro ny filaminana ny olom-pirenena.
Tandindomin-doza ny firenena amin’ireo fiparitahana fitaovam-piadiana mahery vaika